Antoine Griezmann: “Waan ilmeeyey markii aan heshiiska cusub u saxiixay Barcelona” – Gool FM
(Barcelona) 20 Luulyo 2019. Xiddiga dhowaan-galka ah ee kooxda Barcelona ee Antoine Griezmann ayaa shaaca ka qaaday inuu farxad la ilmeeyey markii uu heshiiska cusub u saxiixay kooxda ka arrimisa garoonka Camp Nou.
Waxa uu xiddiga reer France ee Antoine Griezmann dhinaca kale tilmaamay in maalmihiisii ugu horreeyey ee uu la qaatay saaxiibadiisa cusub ee kooxda Barcelona ay u muuqdaan kuwo aad u fiican.
Wargeyska Marca ee ka soo baxa dalka Spain ayaa soo bandhigay hadallada Antoine Griezmann kaddib wareysi uu bixiyey;.
“Markii aan ogaaday inaan noqday ciyaaryahan Barcelona ah, waxaan la xiriiray Aabahay, waxaana bilaabay inaan farxad darteed la ilmeeyo, sababtoo ah wuu i garab taagnaa dhibaatooyinkan oo dhan, laakiin ugu dambeyntii wax waliba way dhammaadeen, waxaan la joogay, saaxiibadeey, xaaskeyga iyo carruurteyda waxay ahayd waqti cajiib ah, maalmahayga ugu horreeyay ee Barcelona aad ayey u fiicnaayeen, inkastoo ay jireen cadaadis badan, waxaan doonayey inaan soo af-jaro fasaxayga, isla markaan aan bilaabo loollankan cusub.”
“Qolka dhar bedelashada si fiican ayaa la iiga soo dhoweeyey, xilligaan la joogana waan ku raaxaysanayaa, waxaan rajaynayaa inaan helo kalsooni mardhow, si aan u soo bandhigo wax walba oo awoodeyda ah, isla markaana aan ugu raaxeeyo nafsaddeyda.”
“Waxaa hubaal ah inaan ku raaxaysan doono fuurida la iiga soo horjeedo marka aan ku ciyaarayo garoonka Wanda Metropolitano taasi waa qeyb ka mid ah kubadda cagta.”
“Taageerayaasha Atletico Madrid aad ayey i jeclaayeen, marka uu qof baxayana waxa ay dareemayaan dhibaato, tanoo kale waxa ay igu dhacday markii ugu horreysay oo aan booqdo garoonka Real Sociedad kaddib imaatinkeygii Atletico, wax fudud ma ahayn.”
“Kooxaha Atletico Madrid iyo Real Sociedad waxay ku jiri doonaan qalbigeyga sababtoo ah wax badan ayey ayay ii soo qabteen.”
Yeelkeede, Xiddiga xulka qaranka Faransiiska kula guuleystay Koobkii Adduunka 2018 ayaa adduun dhan 120 milyan oo euro ay Barcelona kaga soo qaadatay suuqan xagaaga kooxda ay ku xafiiltamaan Spain ee Atletico Madrid.